Xarumaha ganacsiga ee kuyaala magaalada Garoowe oo xiran - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandXarumaha ganacsiga ee kuyaala magaalada Garoowe oo xiran
August 23, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Xarumaha ganacsiga ee kuyaala magaalada Garoowe oo xiran. [Xigashada Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Xarumaha waa-weyn ee muhiimka ah ee ganacsiga oo kuyaala magaalada Garoowe ayaa xiran maanta oo Arbaco ah.
Ganacsatada ayaa go’aan ku gaartay in ay xiraan goobahooda ganacsiga kadib markii ay dowladdu ku khasabtay in ay qaataan lacagta duuga ah ee Shillin Soomaaliga, sida il-wareedyo ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Gudaha Puntland, ganacsatada ayaa diiday in ay qaataan lacagta duuga ah ee Shillin Soomaaliga, taasoo keentay sicir barar balaaran oo ku yimid qiimaha maciishada asbuucyadii lasoo dhaafay.
Xildhibaan Cabdijamaal oo ku dhawaaqay musharaxnimadiisa guddoomiyaha baarlamaanka Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Xildhibaan Cabdijamaal Cusmaan Maxamed ayaa ku dhawaaqay in uu u taratamayo tartamayo xilka guddoomiyaha baarlamaanka Puntland. Cabdijamaal ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay Puntland, balse waxaa aad loogu yaqaan in uu ahaa [...]
Wasiirka arrimaha dibada DFS oo waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ka guddoomay safiirka cusub ee Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Safiirka cusub ee Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya, Stephen M. Schwartz, ayaa maanta oo Talaado ah waraaqihiisa aqoonsiga safiirnimo u gudbiyay wasiirka arrimaha dibada dowlada federaalka Soomaaliya, Cabdisalaam Cumar Hadliye. Safiir Schwartz oo hadlay [...]